Izikhwama Ezinhle Kakhulu Zenja Yezinja Ezingaboli | Izinja Zomhlaba
Izikhwama ezinhle kakhulu zenja ezingaboli
Kunokuqwashiswa okwengeziwe ngodaba lwendawo ezungezile, futhi mhlawumbe yingakho kuvame kakhulu ukuthola izikhwama zemfucuza yezinja ezingaboli. ukuze ukucosha indle yenja yethu nakho kungabi isenzo esingcolisa iplanethi yethu.
Kulesi sihloko ngeke sikhulume kuphela ngezikhwama zemfucuza yezinja ezingcono kakhulu ezingaboli singazithola ku-Amazon, kodwa sizophinde sikhulume ngalokho abayikho, izinhlobo zabo ezihlukene nokuthi zingahlukaniswa kanjani. Futhi, uma unentshisekelo kulesi sihloko, siphinde sincome lokhu okunye okuthunyelwe mayelana nezikhwama ze-poop zezinja.
Ama-Amazon Basics - Izikhwama ...
Ama-editets, izikhwama ze-Poop...
Izikhwama Zendle ...
Izikhwama ze-Greener Walker ...
I-Nova Imboxs 330 Bags...
1 isikhwama sendle senja esingcono kakhulu esingaboli
1.1 Isikhwama esivundiswe ngokugcwele esenziwe ngommbila
1.2 Izikhwama ezenziwe ngo-50% wesitashi sombila
1.3 izikhwama ezishibhile eziphezulu ze-polyethylene
1.4 Izikhwama ezibolayo ezisezingeni eliphezulu
1.5 600 izikhwama ezinkulu zendle
1.6 I-Bioplastic poop scooper
1.7 Izikhwama zendle ezingaboli
2 Kungani ukhethe isikhwama biodegradable?
3 ezinye izindlela ezibolayo
3.1 Izikhwama ezibolayo ngokuphelele
3.2 Ipulasitiki engu-50%.
4 Ungazi kanjani ukuthi isikhwama siyabola
5 Ungathenga kuphi izikhwama zemfucuza yezinja ezingaboli
isikhwama sendle senja esingcono kakhulu esingaboli
Isikhwama esivundiswe ngokugcwele esenziwe ngommbila
Izikhwama ze-BIOOK Dog Poop ...
Imibono engaphezu kwezinkulungwane ezimbili nge-Amazon ivumela le modeli njengehamba phambili phakathi kwezikhwama zemfucuza yezinja ezingaboli. Izinto ezenziwe ngazo zivela kummbila, zimelana kakhulu, zivula ngokuzikhandla futhi ngesikhathi esifanayo azinakho ukuvuza noma iphunga. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi bahambisane nesitifiketi se-OK Compost ye-European Union kanye ne-United States. Ngemuva kokusetshenziswa, isikhwama sizobola futhi izinsalela ezishiywe ngemuva ngeke zingcolise imvelo. Ngaphezu kwalokho, iza necala lokuzithwala njengesipho.
Izikhwama ezenziwe ngo-50% wesitashi sombila
Ngathi ishibhile kunemodeli yangaphambilini, lezi zikhwama zokuqoqa indle yenja yakho azikwazi ukubola ngokuphelele, nakuba iqukethe u-50% wesitashi sombila kanye nemininingwane (efana nomqulu ongaphakathi kwezikhwama) nayo yenziwa ngezinto ezigaywa kabusha ezifana nekhadibhodi. Makhulu impela futhi amelana, futhi awangeni manzi ngokuphelele. Iphakethe ngalinye liqukethe izikhwama ezingamakhulu amathathu ezihlukaniswe zibe imiqulu engamashumi amabili enezikhwama eziyishumi nanhlanu isikhwama ngasinye.
izikhwama ezishibhile eziphezulu ze-polyethylene
Uma ufuna izikhwama ezishibhile ngaphandle kokubi ikakhulukazi emvelweni, le nketho ayimbi. Nakuba zingaba zemvelo kakhulu (zenziwe nge-polyethylene ephezulu-density, ezingagaywa kabusha kalula, nakuba zisangcolisa), zinkulu, zimelana, zikhululekile kakhulu ukugqoka futhi zinamandla okwanele. Futhi, letha isibambi sesikhwama sesipho. Iphakethe ngalinye linezikhwama ezingama-330.
Izikhwama ezibolayo ezisezingeni eliphezulu
I-Amazon Brand - Izikhwama ze-Umi...
Izikhwama ze-Umi azithembisi kuphela umkhiqizo ophezulu, ongazweli, ongavuzi namakha kanye nomthamo omkhulu, kodwa futhi ziyabola ngokuphelele, njengoba zithembisa ukuthi izikhwama zazo zenziwe ngezinto ezivundisiwe, ikakhulukazi ngesitashi semifino.. Umkhiqizo uthembisa ukuthi isikhwama sihlukana ngokwaso ezinyangeni ezingu-18 futhi sedlule izindinganiso zekhwalithi zase-United States kanye ne-European Union. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha phakathi kwezinguqulo ezimbili, eyodwa enezibambo (ukubopha isikhwama futhi usihambise kalula) kanti enye ngaphandle kwayo. Iphakheji futhi i-eco-friendly futhi kulula ukuyigaya kabusha.
600 izikhwama ezinkulu zendle
Uma inja yakho itshala ama-sequoias ngaphezu kukaphayini, ungase udinge isikhwama esikhulu. Lawa maJalimane kanye ne-shit emaphaketheni (akuzange kucace nakakhulu) afeze lokho akuthembisayo: izikhwama ezingaphezu noma ezingaphansi kuka-600 ezingaba ngu-30 cm ezingenayo i-microplastics futhi isithembiso sokulahla ngaphandle kokushiya izinsalela ngemuva, futhi OK Isiqinisekiso somquba sitywina se-European Union ukuze sikufakazele. Ngaphezu kwalokho, ziqinile kakhulu, azinaphunga, futhi azivuzi futhi azinaphunga.
I-Bioplastic poop scooper
Umkhiqizo othokozisayo nowemvelo okufanele udunyiswe ngobuqotho bawo, ngoba bayaqinisekisa ukuthi wenziwa ikakhulukazi ngommbila., kodwa futhi kusukela ku-petroleum derivatives (okungukuthi, njengoba ungacabanga, akuyona into enhle kakhulu). Ngokulandelayo, babika ukuthi nakuba iqukethe izakhi zalolu hlobo, anezakhi zamakhemikhali ezivumela ukuba ziwohloke ngokuhamba kwesikhathi. Izikhwama zine-OK Compost seal ye-European Union futhi zimelana kakhulu, ngaphezu kwalokho, zinezibambo, okwenza kube lula ukuvala nokuyiphatha.
Izikhwama zendle ezingaboli
I-PURENV I-Biodegradable ...
Okokugcina, ezinye izikhwama ezikwazi ukubola (sithi "kancane kancane" ngoba, njengemikhiqizo eminingi, kunengxenye kuphela eyenziwe ngesitashi sombila). Kulokhu, kunezikhwama eziluhlaza ezingaba ngu-240, ezineziphakeji ezenziwe ngekhadibhodi, okulula kakhulu ukuzisebenzisa kabusha. Kodwa-ke, okunye ukuphawula kusho ukuthi athambile futhi kunzima ukuwavula, ngakho-ke uma inja yakho ifuna ukuya endlini yokugezela ungase udinge okuthile okungazweli.
Kungani ukhethe isikhwama biodegradable?
Njengamanje, futhi ngokwandayo, kubaluleke kakhulu kunikezwa imvelo kanye nomthelela womuntu esinawo kuyo (okubizwa ngokuthi i-ecological footprint). Sekuyisikhathi eside thina bantu sisebenzisa izinto eziyingozi emhlabeni njengepulasitiki, okuthatha amakhulu eminyaka ukuwohloka nokunyamalala. Eqinisweni, ngisho nalapho sehlisa isithunzi, sishiya umkhondo wama-microplastics azosilimaza ngempela njengoba, phakathi kwezinye izinto, agcina ngokungenwa yizinhlanzi (futhi ukuqagela ukuthi ubani odla izinhlanzi).
Ngenxa yalesi sizathu, futhi kucatshangelwa ukuthi izinja zizikhulula, njengokujwayelekile, izikhathi ezimbalwa ngosuku, kunconywa kakhulu ukukhetha umkhiqizo ozoqoqa indle ukuthi ingokwemvelo ngangokunokwenzeka, futhi ngaleyo ndlela inciphise umkhondo wethu emhlabeni.
ezinye izindlela ezibolayo
Ukuba yinto entsha ekhathazayo, sisesigabeni sokuhlola mayelana "nepulasitiki entsha", okungukuthi, izinto ezicishe zifane nepulasitiki kodwa zenziwe ngezinye izinto ezingalimazi kangako. Emakethe singathola:
Izikhwama ezibolayo ngokuphelele
Yizona ezilandela imithetho yase-USA (ethe ukuxega kancane) kanye neye-European Union. Zenziwe ngezinto ezibonakalayo, njengoba sishilo, zifana kakhulu nepulasitiki kodwa aziqukethe ama-polymers futhi zenziwe ngezinto ezihlukile zemifino, njengommbila. Bathembisa ukuyiqeda ezinsukwini eziyikhulu futhi bangashiyi noma yiluphi uhlobo lwensalela engcolisayo. Ngaphakathi kwalolu hlobo lwesikhwama, kukhona i-biodegradable (ehlehla ngesenzo se-microorganisms) noma i-compostable (iphuka ngaphansi kwezimo ezithile futhi ishiye ngemuva komquba).
Abayona inketho engcono kakhulu, ngisho noma bethembisa ukungcolisa uhhafu, ngoba phela bayaqhubeka nokungcolisa. Zenziwe ngepulasitiki engu-50% kanye ne-50% yezinto eziphilayo ezibolayo, eziningi zazo ezenziwe ngommbila, isibonelo. Imikhiqizo eminingi yalolu hlobo ihambisana nomqulu wangaphakathi wekhadibhodi kanye nephakheji lephepha eligaywe kabusha. Okuhle kuphela ukuthi ishibhile kunalezo ezingaboli ngokugcwele.
Ngezinye izikhathi isixazululo sakudala singcono kakhulu. Uma ufuna umkhiqizo obolayo ngokuphelele ongashiyi mkhondo phansi futhi oshibhile kakhulu, kungcono ukusebenzisa iphepha. Ayinethezekile kakhulu kunezikhwama zepulasitiki, yilokho esasikusebenzisa esikhathini esidlule ukuqoqa ama-poo ezinjeni. Nakuba kungenzeka ukusebenzisa i-clínex, okwakudala kwangempela yi-newsprint: akekho owehlula imvelo futhi ushibhile.
Ungazi kanjani ukuthi isikhwama siyabola
Indlela engcono kakhulu yokuhlola ukuthi isikhwama siyabola noma siyavunda ngokusebenzisa uphawu lwaso, ezoqinisekisa uma ilandela izicaciso ze-United States noma i-European Union.
Ngaphezu kwalokho, uma uthi nhlá futhi nakuba zibonakala zifana nezikhwama zepulasitiki, izikhwama ezibolayo noma ezivundisiwe. futhi banezakhi ezithile ezibahlukanisayo, isibonelo, ukuthinta, ngoba bavame ukuba rougher, noma iphunga, elivame ukushuba kakhulu kunamapulasitiki.
Ungathenga kuphi izikhwama zemfucuza yezinja ezingaboli
Ungakwazi thenga izikhwama ukuze uqoqe indle yenja yakho ezindaweni eziningiKodwa-ke, akubona bonke abazothola kalula amamodeli angaboli. Phakathi kwezinto ezivame kakhulu yilezi:
En Amazon ngaphandle kokungabaza, banesibalo esikhulu kunazo zonke sezikhwama zenja ezingaboli emakethe. Nokho, ngezinye izikhathi imikhiqizo ingabhalwa ngokungeyikho noma ilahlekisa, njengoba eminingi ingaboli ngokugcwele. Iseluleko esihle ngaphambi kokuthenga noma yini ukubheka ukubuyekezwa, ngoba abasebenzisi abaningi baqaphela kakhulu lolu hlobo lwento.
En izitolo ezikhethekile ze-inthanethi njenge-TiendaAnimal noma i-Kiwoko kungenzeka futhi ukuthola izinhlobo eziningi zezikhwama. Kulokhu, kufanelekile ukusizakala ngesinye sezaphulelo eziningi noma amaphromoshini ukuze ukwenze kushibhe.
Okokugcina, ku izitolo ezikhethekile ngemikhiqizo esetshenziswa kanye, njengoMonouso, uzothola nemikhiqizo eminingi efeza umsebenzi wayo ngenkathi ingabi yingozi emvelweni.
Izikhwama zemfucuza yezinja ezibolile ziwumkhiqizo othi, lapho usebenzisa nsuku zonke, kubalulekile ukuthi uhlanzeke ngangokunokwenzeka, akunjalo? Sitshele, ingabe usebenzisa noma yiluphi uhlobo lwalezi zikhwama? Ingabe uyasincoma? Hlobo luni lomkhiqizo olusebenzisayo ukucosha indle yenja yakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izikhwama ezinhle kakhulu zenja ezingaboli
Izintambo zokuluma izinja: amamodeli angcono kakhulu namathiphu
Amacansi amahle kakhulu wezinja